काभ्रेको कुन पालिकामा कति छन् सक्रिय सं’क्रमित ? – मिलिजुली खबर
काभ्रेको कुन पालिकामा कति छन् सक्रिय सं’क्रमित ?
काभ्रेमा पछिल्लो दिन कोरोना भाइरसको सं’क्रमित को संख्या घट्दो क्रममा छ । परीक्षण दर कम भएपछि सं क्रमितको संख्या पनि निकै घटेको हो । जिल्लामा पछिल्लो एक हप्तादेखि सक्रिय सं क्रमितकको संख्या ५ सयभन्दा कम छ ।
जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्दा निको हुने सं क्रमितको संख्या बढी छ भने थपिने संख्या कम छ । सं क्रमितको संख्या कम हुँदै गएपछि जिल्लामा निषेधाज्ञालाई निकै खुकुलो बनाइएको छ भने चहलपहल बजार निकै देख्न पाइन्छ ।
जिल्लामा अहिले कोरोनाभाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या ३९२ मात्र रहेको छ । जसमा ५७ जना अस्पतालको आईसोलेसनमा छन् भने ३२५ जना होम आईसोलेसनमा रहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी बनेपा नगरपालिकामा संक्रमित छन् जहाँ सयजना सक्रिय संक्रमित छन् । जहाँ १० जना अस्पतालको आईसोलेसनमा र ९० जना घरमै रहेको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ ।
त्यस्तै त्यस्तै धुलिखेल नगरपालिकामा ५६ जना छन् । जसमा १३ जना अस्पतालको आईसोलेसनमा छन् भने ४३ जना होम आईसोलेसनमा रहेकाछन् । त्यसैगरी पनौती नगरपालिकामा ५२ जना सं क्रमित छन् । ५२ जना नै ५२ जना नै होम आईसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ ।
त्यसैगरी पाँचखाल नगरपालिकामा ४९ जना संक्रमित छन् । जसमध्ये ९ जना अस्पतालको आईसोलेसनमा र ४० जना होम आईसोलेसनमा छन् । नमोबुद्ध नगरपालिकामा १६ जना सक्रिय संक्रमित छन् र तीमध्ये १३ जना अस्पतालको आईसोलेसनमा र ४ होम आईसोलेसनमा रहेका छन् ।
जिल्लाको ६ वटा नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा कम मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा ९ जना सं’क्रमित रहेका छन् । ९ जना मध्ये ८ अस्पतालको आईसोलेसनमा छन् भने १ जनामात्रै होम आईसोलेसनमा रहेका छन् ।
७ वटा गाउँपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी बेथानचोक गाउँपालिकामा २३ जना छन् । २३ जना नै होम आईसोलेसनमा रहेका छन् । त्यसैगरी भुम्लु र खानीखोला गाउँपालिकामा २०/२० जना रहेका छन् । उनीहरु सबै घरैमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ ।
महाभारत गाउँपालिकामा १४ जना कोरोना भाइरसका सक्रिय सं क्रमित छन् र उनीहरु पनि घरमै होम आईसोलेसनमै छन् । रोशी गाउँपालिका मा १० जना सक्रिय सं’क्रमित छन् र उनीहरु पनि घरमै रहेका छन् ।
चौरीदेउराली गाउँपालिकामा ९ जना सक्रिय सं क्रमित छन् । जसमा ४ जना अस्पतालको आईसोलेसनमा छन् भने ५ जनाको होम आईसोलेसनमा रहेका छन् ।त्यसैगरी तेमाल गाउँपालिकामा ६ जना सक्रिय सं क्रमित छन् । ६ जना नै होम आईसोलेसनमा रहेका छन् ।
प्रदेश सांसद हुमागाईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 'एक घर, एक धारा' यसरी गर्दै छन् पुरा